5 Best Adọrọ N'ihi na Na Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Adọrọ N'ihi na Na Na Europe
Ejegharị ejegharị na ụmụaka nwere ike ma na-a nro ma ọ bụ oge kacha mma nke ndụ gị. N'ihi anyị na ụmụntakịrị anyị 'achọ ọdịdị na anyị chọrọ ime ha, a na-enwekarị dịghị n'etiti ala. Otú ọ dị, e nwere ụzọ ka ị na-eme njem na ụmụ mfe n'ihi na onwe gị. The ụzọ kasị mma na-eme ya bụ iji hụ na-eto eto niile nwere ihe na-eme ma ọ bụ na-ahụ. Iji nyere gị aka na-ha nwere, anyị agbakọtara ndepụta nke 5 kacha mma na-adọrọ mmasị ụmụaka na Europe. Ị nwere ike mfe iru a ebe ụgbọ okporo ígwè. Ka anyị nwere anya:
Nkiri nke Kids na Italy
Offerstali na-enye ole na ole kediegwu ebe nkiri maka ụmụaka ma ọ bụrụ na-enwe na- akụkọ ihe mere eme nlegharị anya anaghị ejikere ha. na Viserba ntụrụndụ park, ha nwere ike ịhụ ndị nlegharị anya nke Italy na miniature! The park na-atụmatụ a nma-aga-gburugburu, ama egwuregwu, dị iche iche na agafe, na a sinima. Nhọrọ, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị na Rome, ị nwere ike ịga Hydromania mmiri park. Dị nnọọ ná mpụga nke Rome, ọ na-ekwe nkwa a ìgwè ihe nkiri slide na mmiri fun, nke na-eme ya zuru okè maka ụmụaka.
Nkiri nke Kids na England
Otu n'ime ndị isi na-adọrọ mmasị ụmụaka na England bụ Warner Bros. Studios Ime nke Harry Potter tour na London. Otú ọ dị, na-eto eto na-eme nchọpụta nwere mmasi ebube nke agwa, London nke Natural History Museum bụ a oké oke. E nwere ọtụtụ ewu-enyi na enyi ngosi ebe ha nwere ike ịmụta banyere dinosaurs na anyanwụ usoro. Ọ bụ oké ahụmahụ na-eme ka London uru ịga maka ezinụlọ.
Nkiri nke Kids na Netherlands
Amsterdam na-emekarị na-adịghị atụ aro ka a na ezinụlọ-enyi na enyi ebe, ma nke ahụ apụtaghị na ọ na-apụghị ịdị otú. maka ụmụaka, ikekwe kasị akpali akpali ebe bụ Natura Artis Magistra ma ọ bụ nka na. Ọ bụ Nnukwu zoo zuru ezu na akwarium, playgrounds, Zoological Museum, na a planetarium. Ọ na atụmatụ karịa 900 umu anumanu!
Nhọrọ, i nwere ike isi Efteling na Kaatsheuvel. Ọ bụ nnukwu ogige ntụrụndụ na mba, na a fantasy isiokwu na a na-elekwasị anya myths na akụkọ na-emeghị. E nwere ọtụtụ ịnyịnya na ntụrụndụ nke ụmụaka ndị na-ụtọ nke akụkọ ifo.
Mgbe ọ na-abịa ntụrụndụ maka ụmụaka, Belgium awade ya isiokwu park, Plopsaland. Ọ bụ yi, full of ala coasters na ámá egwuregwu, na nwere a dịgasị iche iche nke isiokwu nwa ọ bụla na-enwe. O nwekwara ugbo na anụmanụ na ụmụaka nwere ike ịga leta, nakwa dị ka a nkiri na ụgbọ mmiri agafe.
Antwerp ka De Panne Ụgbọ oloko
Brussels ka De Panne Ụgbọ oloko
Otu n'ime ndị kasị ama na-adọrọ mmasị n'ihi na ụmụaka bụ ịrụ ụka adịghị Disneyland. Ọ na-adịghị ya mma karịa onye na-na Paris. Ọ bụ ihe kasị ewu ewu na isiokwu park nile nke Europe maka a mere. E nwere ise themed ebe, nakwa dị ka ọtụtụ ịnyịnya na-adọrọ mmasị. Ụfọdụ n'ime ha gụnyere Parc Asterix, My Chemical Romance nke Caribbean, Buzz Lightyear Laser Blast na Ọ a Obere World. A nleta Paris na France na ụmụaka abụghị ezu na-enweghị Disneyland.
Paris na Disneyland Marne-la-Vallee Ụgbọ oloko
Brussels na Disneyland Marne-La-Vallee Ụgbọ oloko
Njikere nwere agaghị echefu ezumike gị dum ezinụlọ? Gaa na ụfọdụ nke 5 kacha mma na-adọrọ mmasị ụmụaka na Europe anyị ndepụta, na ị ga-enwe a gbawara. Jide n'aka na-eme atụmatụ gị ezumike na akwụkwọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè n'oge!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ enye anyị n'aka na a njikọ a blog post, ma ọ bụ na ị pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-attractions-kids-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml na i nwere ike ịgbanwe / de na / pl ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#nkiri #traveleurope europetrains europetravel eurotrip ụgbọ oloko Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem njegharị ejegharị travelfrance travelitaly nje ndi njem traveltips